Midowga Yurub oo ka digay Dib u dhaca Doorashada Soomaaliya, Farriin culusna u diray Madaxda... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Midowga Yurub oo ka digay Dib u dhaca Doorashada Soomaaliya, Farriin culusna u diray Madaxda…
Midowga Yurub ayaa ka digay in khilaafka Doorashada Soomaaliya ka taaan iyo heshiis la’aanta madaxda Soomaalida ay keenayso dib u dhac xoog leh iyo dhaawac soo gaaray kalsoonidii ay ku qabtay dowladnimada Soomaaliya.
Qoraalka uu soo saaray ku xigeenka Madaxa Siyasaadda iyo Amniga Midowga Yurub Josep Borrell ayaa lagu sheegau in Heshiis la’aanta Doorasho laga qabto Soomaaliya ay tahay xaalad aad u culus oo aan dan ugu jirin muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Waxaa dhammaan dhinacyada Soomalida lagu booryey inay sii wadaan, kana shaqeeyaan sidii heshiiyaan looga gaari lahaa hirgelinta geeddi-socodka doorashooyinka, waxaana hoggaamiyeyaasha siyaasaddu lag dalbaday inay sii wadaan dadaalkooda ku aaddan hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtember.
Qoraalka Midowga Yurub ayaa looga digay doorashooyin is barbar socda iyo muddo kororsi oo aan aheyn mid farsamo uu noqon doono Dib u dhac xoogan oo Soomaaliya soo wajaha.
“Is-mariwaaga siyaasadeed ee hadda jira wuxuu dhaawacayaa kalsoonida Midowga Yurub ee horumarka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaasha Dowladaha xubnaha ka ah Dowlada Federaalka waxaa looga baahan yahay inay xaliyaan ismari waaga siyaasadeed ee qatarta ku ah mustaqbalka Soomaaliya iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashada.” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Midowga Yurub.
Previous articleIngiriiska oo Golaha Amniga Q/Midoobay isugu yeeray Kulan degdega oo ku saabsan Xaaladda Somalia
Next articleGuddoomiyihii Soomaaliga ahaa ee Maxkamadda Caalamiga ICJ oo xilka banneeyay (Yaa kala wareegay?)